KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dhac iyo Boob-ka ey wadaan Maleeshiyaadka Raaskambooni iyo Ciidamda Dowladda
Saturday 2 February 2013 11:50
Dhac iyo Boob-ka ey wadaan Maleeshiyaadka Raaskambooni iyo Ciidamda Dowladda
Muqdisho (KON) - Sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku nool Degmada Wanlaweyn iyo qaar kamid ah ganacsatada magaalada Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa dhac iyo boob xooggan waxaa ay ku hayaan xarumaha ganacsiga ee magaalada Kismaayo.
Gudoomiyaha degmada Wanlaweyn ee Gobolka Sh/Hoose Xaaji Isxaaq Maami ayaa sheegay in Ciidamadaasi ey dhibtaato weyn ku hayaan Dadka rayidka ah iyo Ganacsatada Degmada.
"Dhaca ey geesteen Ciidamda ayaa Labo jibaar noqday Maalmihii lasoo dhaafay" Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Isbaarooyinka ey dhiganayaan Maleeshiyaadka Raaskambooni ayaa faraha ka badatay oo siiba Ganacsatada lagu Boobayo.
Dhaca iyo boobka ay Ciidamadaan u geysanayaan shacabka waxaa bar bar socda howlgallo aan dadka lagu kala sooceynin oo lagu qab qabanaayo qof kasta oo ay Ciidamadu indha saaraan.